Doorkaaga Wakiil Ahaan: Si Qoto-dheer - SEIU6
Doorkaaga Wakiil Ahaan: Si Qoto-dheer
DOORKAAGA WAKIIL AHAAN (QAYBTA II)
Hadda waxaad haysataa xaqiiqooyinka iyo jawaabta horudhaaca ah ee maamulka. Haddii uusan heshiis jirin, maxaa xiga?
“Cabashooyinka waa inaan lagu qaldin mas’uuliyadaada ugu wayn ee wakiil ahaan: ee ah inaad dhisto xubinnimo midaysan, abaabulan, oo kuwada shaqeeya goobtaada shaqada.” Ma xusuusataa? Waxaad ku akhrisay midaas bogga 1.
Markaa dhammaan shaqadaada ilaa hadda (waraysiga shaqaalaha, baadhista, la kulanka kormeeraha) kaliya waa isku diyaarinta inaad ku lug lahaato xubnaha.
Waxaad xubnaha u geyn doontaa dhibaatada, iyo dhammaan waxaad baratay. Sabab?
SEIU waxay aaminsan tahay in dhammaan awoodda midowga ay ka timaado ka qaybgalka iyo ballanqaadka xubnaha.
Xallinta dhibaatooyinka shaqada waxay aad ugu xiran tahay geesinimada iyo midnimada xubnaha marka loo eego cabashooyinka ama doodaha. Haddii xubnaha midowga aysan si dhab ah u daneyneynin, maamulka ayaa ogaan doona. Kula xisaabtan.
Isla sidaas oo kale ayaa looga baahanyahay gorgortanka heshiisyada wanaagsan ama helitaanka sharciyo shaqo oo cadaalad ah. Si kasta oo aan u gorgortami karno ama u ololaynno, si kasta oo aan u gorgortami karno, haddii xubnaheenu ay nacas yihiin ama qaybsan yihiin, waannu qasaari doonnaa.
Taasi waa sababta shaqadaadu u tahay inaad abaabusho xubinnimada ku saabsan arrimaha saameeya noloshooda. Waxaad tan u samaysaa laba siyaabood oo waaweyn:
La xariirida. Haddii xubnahaagu aanay garanayn waxa socda, si fiican uma abaabuli karaan oo ma gaadhi karaan go’aanno. Wakiilo ahaan, waxaaynu u shaqaynaynaa xubnaha. Taasi waa sababta ay shaqadeenna u tahay inaan iyaga wargelino. Sidee? Si kasta oo aad awooddo. Habka ugu wanaagsan waa in la sii wado wada xiriirka, labada-dhinac, fool-ka-foolka ah, ee lala yeesho xubin kasta wakhtiga nasashada, qadada, iyo marka aad shaqaynayso. Waa inaad sidoo kale shirar yeelato. Kulamada joogtada ah. Wargaaysyada. Isticmaal boorarkaas faalo qorka aan ka gorgortamnay si aan u helno (balse ma ahan beddelka xiriirka shakhsi ahaaneed). Soo dhig ogeysiisyada iyo warbixinada xarunta websaydhka deegaanka oo samee dir iimayl kooxeedyada si aad xubnahaaga ula socodsiiso wax walba. Samee wax kasta oo ay kugu qaadato. Noqo qof hal abuur leh.
Haddii wakiillada iyo hoggaamiyeyaasha kale ay ku guuldareystaan inay u sheegaan xubnaha waxa socda, waxaad isla markiiba la kulmi doontaa xanuun daran. Haddii aadan weligaa arag koox gorgortan oo ku kala jajajabay shaki, xanta, xanaaqa, niyad-xumada, xishoodka, iyo kooxaha dagaalka, na aamina anaga: Waa foolxumo.
Waxaase ka sii daran, waxaad lumin doontaa waayo-aragnimada urursan iyo aqoonta xubnahaaga-taasoo malaha ah kheyraadkaaga ugu weyn.
Shaqaalaha qaar isma xilqaami doonaan xitaa haddii ay hayaan waxyaabo muhiim ah oo ay sheegaan. Adiga ayay ku xiran tahay inaad la xiriirto.
Ficilka. Sida aad ku arki doonto boggaga soo socda, waxa jira siyaaboyin badan oo midowga ku xalin karo mashaakilada oo aan ahayn kaliya cabashooyinka rasmiga ah. Waxay ku xiran tahay xubnaha inay go’aan ka gaaraan, balse waa shaqadaada inaad u soo jeediso koorsooyin ficil ah oo ku saleysan baaritaannadaada iyo khibradahaaga xallinta dhibaatada.
Markaad xubnaha ka qaybgeliso xallinta mashaakilaadka ama ku guulaysiga horumarka, wadooyin badan ayaa furma.
Dabcan, abaabulida xubnahaaga waxay u baahan tahay wada xiriir sii socda, toos ah oo shakhsi ahaaneed oo lala yeesho shaqaale kasta, balse wakiilka SEIU ahaan, waad ogtahay taas.
1. Kaliya ka qaybgelinta xubnaha ayaa mararka qaarkood keeni kartaa maaraynta xal. Marka xubnuhu ay ku lug yeeshaanna, maamulku wuu ogaan doonaa, xitaa haddii ay iska dhigaan inayn ogeen.
2. Haddii maamulku doorto inuu aamuso, iyaga oo midnimo ka muujnaya goobta shaqada (codsiyada, isu soo baxyada, “maalmaha badhanka,” tusaale ahaan) waxay keeni kartaa cadaadis badan halka ku haboon.
3. Abaabulista taageerada bulshada ayaa baddeli karta xaalada. Tani waa halka ay saaxiiinadaad isbahaysigu tihiin (kaniisadaha, macalimiinta, dadka waxqabadka bulshada) ay xogaa (ama in badabn) oo faa’iido ah ka raadin karaan.
4. Marka aad haysato taageerada xubinta, waxaad fursad fiican u haysataa inaad fariintaada mariso warbaahinta wararka. Waxaad awoodi doontaa inaad ka abuurto sumcad wanaagsan midowga iyo shaqada xubnahaagu qabtaan haddii aad awooddo inaad samayso waxyaabaha saxda ah. (Wax khaldan samee tanina adiga ayay kugu soo noqon kartaa.)
5. Saraakiisha la soo doortay ayaa mararka qaarkood loo adeegsan karaa inay cadaadis saaraan maamulka. Taasi waa hal sabab oo aan u leenahay barnaamijyadeena waxqabadka siyaasadeed. Siyaasaddu waxay saamaysaa wax kasta oo aanu samayno shaqaale ahaan, iyo wax kasta oo aan ka helno (ama aanan ka helin) dawladda.
6. Hay’adaha dawladda. Tani waxay guud ahaan qaadataa qiyaastii weligeed, laakiin halista hajabaada shuruucda dawladda ayaa mararka qaarkood cabsi gelin karta loo-shaqeeyaha ugu xun.
WAKIILKA OO BARE AHAAN AH
Wakiil ahaan, waxaad haysataa fursad aad ku barto xubnaheena mar kasta oo aad la kulanto iyaga. Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in xubnuhu ay aqoon ku filan u leeyihiin inay ka qaybqaataan samaynta qaanuunk midowga, inay garanayaan meesha uu midowga ka yimid iyo halka uu ku socdo. Xubnuhu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida midowga u gaadho go’aannada iyo sida uu u fuliyo, waxa uu yahay qaanuunkiisu, iyo caqabadaha hortaagan midowga iyo xubnahooda. Xubnaha aqoonta leh waxay taageeraan midowga marka ay u halgamayaan wax hagaajinta waxayna difaacaan midowga marka la soo weeraro.
Mid in la xasuusto u baahan ayaa ah in waxbarashada xubnaheenna aysan ahayn sida aad u malaynayso waxbarid dhaqameed.Waxbarashada xubnaha midowgeena waa mid ficil ku salaysan. Xubnaha midowga waxay wax ku bartaan
iyagoo wadaagaya khibradooda,
falanqaynta iyo isweedharsiga wixii dhacay.
Tani waxay la macno tahay inay dhici karto wakhti kasta, iyo meel kasta. Qaado waqti si aad u sharaxdo barnaamijka siyaasadeed ee midowga marka aad ururinayso shaqaalaha bangiyada telefoonada hal habeen. Ama ka hadal wadajirka shaqaalaha marka xubnuhu ay ku guulaysteen dagaal cabasho oo muhiim ah iyada oo loo marayo bannaanbaxyada goobta shaqada. Xataa marka aad ku guuldaraysato cabasho, waxaa jiri kara cashar ku saabsan muhiimada ay leedahay in loogu dagaalamo luqad wanaagsan wada xaajoodka heshiiska ee soo socda.
La Socodsii Xubnaha. La socodsiinta xubnaha waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan shaqadaada macalinimo. Hubi in xubnuhu ay ogaadaan waxa midowga qabanaayo–oo hubi in hogaanka midowga ogyahay waxa xubinimada ay ka qabaan waxa midowga qabanayo. Ogaysiisinta xubnaha marka shir ama hawlo kale oo midowga uu dhacayo waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadaada. Sharaxaada sababaha shirka ama hawsha iyo sida ay ugu habboon tahay barnaamijka guud ee midowga waa fursad kale oo lagu noqon karo bare.
Ka-qaybgalinta xubnaha ee midowga degaanka iyo ololayaasha Caalamiga ah si loo ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha iyo in la ilaaliyo heerarka nolosha ee bulshada dhexdeeda waa hawl waxbarasho.
Hoggaan Abuur. Wakiilku wuxuu hoogaan ku abuuraa inuu in xubnaha uu u sahlo inay gacan ka gaystaan shaqada midowga. U sheeg dadka inay isku xilqaamaan inay ku biiran guddiyada midowga ama barnaamijyada waxqabadka midowga. U fiirso xirfadaha waxtarka leh ee dadku ay leeyihiin. Haddii qof aanu diyaar u ahayn guddi, sii isaga ama iyada hawl gaar ah-laakin hubi inaad u faahfaahiso waxa ay hawshu ka dhigan tahay iyo sababta samaynta hawshu ay ugu fiican tahay midowga.
Ku Tali Tababar. Lasoco noocyada cabashooyinka iyo tabashooyinka ay xubnuhu keenaan, una sheeg hogaanka deegaanka nooca barnaamijyada tababarada ee loo baahan yahay. Waydii wax golaha gobolka ama shaqaalaha gobolka inay furaan barnaamijyada caafimaadka iyo badqabka haddii ay jiraan xarumo shaqo oo khatar ah ama dhibaatooyinka hawada gudaha. Midowga deegaanka wuxuu sidoo kale ka codsan karaa tababarka ka-hortagga cunsuriyadda ama ka-hortagga xadgudubka galmada Midowga Caalamiga ah haddii ay jiraan dacwado ama haddii qof jeclaysigu horseeddo eex gudaha goobta hawsha. Midowga deegaanku waxa uu bixiyaa tababar wakiilnimo. Midowga caalamiga ahne wuxuu bixiyaa aqoon isweydaarsiga Tababarka-Tabbabaraha si ay u baraan shaqaalaha midowga deegaanka ah iyo hoggaamiyeyaasha sida loo qabto barnaamijyada tababarka.
WAKIILKA OO ABAABULE SIYAASADEED AHAAN AH
Qaar badan oo ka mid ah xuquuqdeena iyo faa’iidooyinkeena ayaa lagu looga hadlaa miiska gorgortanka waxaana lagu daraa heshiisyadeena. Doorkaagu badankiis waa hubinta in heshiiska lagu fuliyo goobta shaqada.
Balse beryahan bulshooyinkeenu way ka weyn yihiin sidii hore, isbedelo waaweyn ayaa dhaco habeen gudihiisa, qof ama midow ma jiro kaligiis gaar ahaan kara. Jeclow ama ha jeclaan, bulshadu aad iyo aad ayay iskuugu tiirsan tahay mar walba, annaguna waa sidaas oo kale.
Wax badan oo ay shaaqaluhu dhamaantood maanta haystan (mushaharka dheeraadka ah, sharciyada cuntada iyo daroogada, Medicare, Soshiyaal Sekuyuritiga, xeerarka caafimaadka iyo badqabka, xitaa nidaamka waxbarashada dawlada) ma aan yeelan lahayn haddii aanan qaadi lahayd tallaabo siyaasadeed shaqaale abaabulan ahaan.
Wakiil ahaan, mar dhow ama mar dheerba waxaad la shaqayn doontaa la-hawlgalayaasha isbahaysiga. Kaas oo, ku xiran meesha aad joogto, noqon karta ku dhawaad qof kasta-midowyada kale, xuquqda madaniga ah iyo ururada xoriyada madaniga ah, dhaqdhaqaaqayaasha bulshada, kooxaha qowmiyadaha, ururada bulshada ama samafalka, isbahaysiga siyaasadeed, wax kasta.
Waxa jira xuquuqo iyo faa’iidooyin badan oo ay go’aamiyaan shuruucda laga soo saaro heer qaran, gobol, ama heer deegaan. Si loo ilaaliyo danaha xubnaheenna, midowga waa inuu ku lug yeeshaa doorashada musharrixiinta ansixin doona oo fulin doona sharciyo kordhinaya oo ilaalinaya xuquuqdeena iyo faa’iidooyinkeena.
Taasi ma dhacayso la’aantaa.
Xubno badan oo SEIU ah ayaa ah shaqaale dawlad ah, ama waxay ka shaqeeyaan jagooyin ay maalgeliyaan hay’adaha dawladda, markaa siyaasaddu si gaar ah ayay muhiim inoogu tahay. Marka siyaasiyiintu gooyaan adeegyada, qof kastaa waxuu luminayaa adeegyada, laakiin qaar naga mid ah ayaa luminayo shaqooyinkeenna.
Guusha aan ku dhisnay urur-siyaasadeed oo xooggan oo u taagan danaha xubnaheena waxay ku xiran tahay adiga iyo awoodda aad u leedahay inaad soo abaabusho xubnaheenna. SEIU waxay ku tiirsan tahay adiga, wakiilka, inaad shaqaaluhu u sahasho inay ku lug yeeshaan ficil siyaasadeed iyo mid sharci. Waad garanaysaa xubnaha, waxaad ku arkaysaa maalin kasta goobta shaqada, waxaadna ku qancinaysaa in wax la isku rogo (ama ma noqon doontid wakiil).
Ka feker waxa aad ku qaban karto goobtaada shaqada ama bulshadaada oo isbedel samayn kara.
Diiwaangeli codbixiyayaasha. Way fududahay. Hadii aan lagu diwangelin, ma codayn kartid. Baro habka diiwaangelinta codbixiyayaasha ee degmadaada. Kadib ficil samee si aad u hubiso in xubnahaagu is diiwaan galiyeen. Si ka sii wanaagsan, shaqaaleysii xubnaha ka qaybqaadanaya ololaha diiwaangelinta codbixiyayaasha.
GOTV (Codadka Hala Dhiibto). Samee wicitaan telefoon, ama shaqaalaysii xubno kale si ay uga qaybqaataan xarunta wicitaanka iyo hawlaha kale ee ka hor doorashada.
Wax bar xubnaha. Kala hadal xubnahaaga (oo dhegayso) musharrixiinta iyo arrimaha. La socodsii wixii ku saabsan doorashada. La soco barnaamijka siyaasadeed iyo sharci ee SEIU ee u dagaalama “Dib U Soo Celin Maraykanka” shaqadeena, xuquuqdeena, iyo tayada nolosheenna si aad wax u barto oo aad uga qaybgeliso xubnahaaga.
Aruuri lacag. Lacagta ayaa wax qabato. Haddii musharraxiinteena ay noqon doonaan kuwo tartamaya, waxay u baahan yihiin lacag. U ururinta lacagta SEIU’s COPE, guddiga waxqabadka siyaasadeed ee midowgeena, ayaa ah hal dariiqo oo lagu sameeyo. U furida xubnaha mushahar jarista COPE (oo si toos ah looga jarayo jeegaga mushaharkooda) ay hal dariiq ah, haddii aad xaq u leedahay inaad sameyso. Siyaabaha kale waxaa ka mid ah bakhtiyaanasiibyada, safarro iyo habeenada qamaarka. (Waxaa jira sharciyo heer federaal iyo gobol ah oo loogu talagalay ururinta lacagaha siyaasadda, sida in la waydiiyo xubnaha SEIU iyo qoysaskooda kaliya inay wax tabarucaan. Baro sharciyada. Way fudud yihiin wayna toosan yihiin, balse waa sharciyada.)
Ololee. Guul ama guul daro Maalinta Doorashada, qof uun ayaa xilka qabanaya, waxaanu danaynaynaa sharciga uu meel mariyo ama fuliyo. Waxay ku lug yeelan kartaa beddelida shaqaalaha mudahaardsan, Medicare, badqabka iyo caafimaadka, ama boqol arrimood oo kale, balse hal shay ayaa la hubaa: Xubnaheena ayay saameyn doontaa. Gacan ka gayso isu soo baxa. Codsiyada saxiix. Abaabul olole warqad-qoraal ah iyo kaadhadhka boostada. Hogaami wafdi u ololeeya madaxda.
Samee isbahaysiga shaqada/bulshada. Xasuuso, wadajirka ayaa xoogan. Midowyada iyo kooxaha bulshadu waxay wadaagaan go’aan lagu xoojinayo bulshadeena iyo bulshooyinkeena. Ka qayb-galka isbahaysiga si loo dhiso awood sharciyeed iyo mid siyaasadeed.
Doorkaaga ku aaddan dhisida awoodda siyaasadeed iyo sharci ee midowgaaga waa muhiim. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid faa’iido leh oo madadaalo leh.
Nasiib darro, gobolada qaar xubnaheena xarumaha dawlada ayaan wali ku raaxaysan xuquuqaha buuxa ee ka qaybgalka siyaasadeed. Sharciyada loo yaqaan “Hatch Acts” ama ” Little Hatch Acts” ayaa xaddidaya xuquuqda siyaasadeed ee shaqaalaha dawlada waxayna ku kala duwan yihiin gobol ilaa gobol. Faahfaahinta kala xidhiidh midowgaga deegaankaaga. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan xubnuhu waxay leeyihiin xuquuqo ah inay ka qaybqaataan.
WAKIILKA OO ABAABULE AHAAN AH
Wakiiladu waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan qorista xubno cusub. Tani dancan waxay noqon kartaa waxa ugu muhiimsan ee midowga sameeyo, sababtoo ah inta ay badan yihiin shaqaalaha uu midowgu ka matalo shirkaddaa, ayay u badan tahay awoodda midowga uu leeyahay iyo sida ugu wanaagsan ee ay kuugu matali karto. Markasta oo ay bataan shaqaalaha abaabulan ee shirkadda, mushaharka iyo faa’iidooyinka ayaa u kordhayo dadka oo dhan.
Aad ayayna muhiim u tahay inaad guulaysato. Midowgaga wuxuu kobci doonaa oo kaliya ilaa xadka shaqaalaha kale ee warshadahaaga, wakaaladaada, ama aaggaaga juqraafiga ay u abaabulan yihiin.
Haddii aad ka shaqeyso dukaan furan, waxaad sameyn doontaa abaabul “gudaha” ah. Tani waxay u baahan tahay in lagu qanciyo dul saaryaasha inay ku biiraan midowga.
Laakiin haddii aad samaysay dhammaan waxyaabihii kale ee aad ka akhriday buug-yarahaan-gaar ahaan doorkaaga ku aaddan samaynta midawga muhimka ah ee joogitaanka goobta shaqada-markaa waxaad horay u qabatay inta badan shaqada adag. Dhisa midowga way iman doonaan.
Balse haddii aad leedahay dukaan midow ama dukaan furan, waxa hubaal ah in aad ka qaybqaadato abaabulka dibadda. Sabab? Sababtoo ah shaqaale ahaan iyo hogaamiye ahaan, waxaad leedahay kalsooni oo aan qabanqaabiye lacag bixin ku habboonayn karin.
Waad garanaysaa shaqada. Awoodna waad u leedahay inaad qabato. Waxaad ku hadashaa luqadda shaqaalaha. Waxaadna arki kartaa dhibaatooyinka iyo awoodda ay shisheeyayaashu kaliya qiyaasi karaan.
Ololaha abaabulka, adiga iyo xubnaha kale ee qabanqaabiyeyaasha aad ayaad muhiim u tihiin. Oo inta badan yihiin shaqaalaha aad ku abaabulayso shirkaddaada, in la’eg oo awood ayaad u yeelan doontaa inaad u dagaalanto mushahar wanaagsan, faa’iidooyin, iyo ixtiraam. Haddii midowgaga deegaanka uu isku arko jasiirad go’doonsan oo aan abaabulnayn iyo shaqaalo laga faa’iidaysto, ma ahaan doono wax aad u dheer.
WAKIILKA OO U DHAQDHAQAAQAHA CAAFIMAADKA IYO BADQABKA AHAAN AH
Caafimaadka iyo badqabka goobta shaqadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadaada wakiilnimo.
Haddii kooxdaadu ay leedahay guddi caafimaad iyo badqab, waxay noqon kartaa shaqadaada inaad gacan ka gaysato hoggaamintiisa. Haddii aadan mid lahayn, waxaa fiican inaad bilowdo.
Waxaa jiray waqti caafimaadka iyo badqabka shaqadu ay ka dhiganaayeen koofiyado bir ah iyo mashiinka ilaalinta, balse ma sii ahan sidi. Dhibaatooyinka ay la kulmaan shaqaalaha SEIU badankood waa kuwo baahsan, sii kordhaya, inta badan farsamo sare ah.
Shaqada xafiiska ayaa mar loo malaynayay inay gebi ahaanba yihiin badqab iyo caafimaad. Asbestos, radon, kaboobashada gacmaha, kumbiyuutarka muuqalka lagala socdo, iyo wasakhowga hawada gudaha ayaa ka dhigay khuraafaadkaas mid aan jirin, iyada oo ay la jiraan shaqaale badan.
Taasi waa meesha aad ka soo galayso. Wakiil ahaan, waxaad yeelan doontaa mas’uuliyad muhiim ah si aad u abaabusho caafimaad iyo badqab. Haddii aad ogaato inaad u baahan tahay caawimo, waxaad ka heli kartaa dhammaan gargaarka aad u baahan tahay Waaxda Caafimaadka iyo Badqabka ee SEIU ama isuduwayaasheeda gobolka ee deegaanka. Wac iyaga.
Waa kan “sharciga xuquuqaha” oo yar ee loogu talagalay shaqaalaha oo Waaxda Caafimaadka iyo Badqabka ee SEIU u arkaan inuu faa’iido leeyahay:
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin goob shaqo oo ammaan ah caafimaadna qabta. Sharcigu wuxuu sheegayaa in loo-shaqeeyaha uu bixiyo goob ammaan ah oo lagu shaqeeyo. Waxba kama odhanayso kharashka.
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin macluumaadka ku saabsan khataraha goobta shaqada, walxaha ay u baylah noqdaan, iyo dhaawacyada iyo jirrooyinka (OSHA 2000 Log).
Shaqaalaha u baylah noqday kiimikooyinka, cudurrada dhiigga ka dhasha, walxaha halista ah, iyo qaar kale oo ka mid ah khataraha goobta shaqada waxay xaq u leeyihiin tababar ku saabsan sidii ay isu ilaalin lahaayeen.
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin inay midowga keenaan khabiiro ku takhasusay caafimaadka iyo badqabka si ay uga caawiyaan ogaanshaha khataraha goobta shaqada.
Shaqaaluhu waxay xaq u leeyihiin inay abaabulaan si ay uga badbaadaan khataraha goobta shaqada.
Maamulka waa inuu soo dhejiyaa OSHA 2000 Log-waxaad u baahan tahay inaad eegto, oo hubiso inuu sax tahay.
WAKIILKA OO XUBIN SHAQADA KA FARIISTAY AHAAN AH
SEIU waxay runtii aaminsan tahay inay sii joogaan xubnaha ku lug leh midowga ka dib marka ay shaqada ka fariistaan. Midowga wuxuu u baahan yahay dhammaan caawinta uu heli karo, oo xubnaha shaqada ka fariistayna ayaa ah dadka khibradda u leh. Way soo arkeen dhamaan.
Haddii midowgaga deegaanka uu leeyahay ururka xubnaha hawlgabay, waxay u badan tahay inaad aragtay iyaga oo shaqaynaya, gaar ahaan adeega bulshada, khadadka cagaaran ee mudaharaadka, diiwaan gelinta codbixiyayaasha, iyo olalaha odbixinta. (Ololayaasha siyaasadda iyo abaabulka, xubnaha hawlgabku waa cajiib.)
Adiga oo ah qofka maalin walba la xiriira xubnaha goobta shaqada, wax badan ayaad ku caawin kartaa adigoo ogeysiinaya midowga shaqaalaha marka ay shaqaaluhu shaqada ka fariisanayaan. Habkaas, waxaan hubin karnaa inaan ogeysiinno iyaga barnaamijka xubnaha hawlgabka ah ee SEIU.
Waxyaalaha qaar adiga iyo midowgaaga deegaanka ayaa la rabaa inaad samaysaan:
Marka xubin uu qorsheynayo inuu ka fariisto shaqada, qof waa inuu shakhsi ahaan u ogeysiiyaa barnaamijka xubnaha hawlgabka ah oo uu ku martiqaado inay ku soo biiraan. SEIU waxay leedahay wax badan oo ay siiso xubnaha hawlgabka ah xubnaha hawlgabkana waxay il muhiim oo awoodeed u yihiin midowga.
Ha iloobin, kgidmadaha xubnaha hawlgabay waxa laga jari karaa gunnada hawlgabyasha nidaamyada dawlada badankood iyo qorshayaasha gaarka ah qaarkood.
Haddii midowgaga deegaanku u baahan yahay in laga caawiyo uu u socodsiin lahaa barnaamijkiisa xunaha hawgabay, kaliya wac Barnaamijka Xubnaha Hawlgabka ah ee SEIU. (Oo weydii qaar ka mid ah xirmooyinka “Diiwaangeli Xubnaha Hawlgabka ah” intaad ku jirto. Waxay leedahay wax kasta oo aad u baahan tahay.)
WAKIILKA OO XIRIIRIYE AHAAN AH
Kani ayaa noqon kara doorkaaga ugu muhiimsan. Waxaad tahay xiriiriyaha muhiimka ah ee u dhaxeeya midowga iyo xubnaha. Waa shaqadaada inaad u sharaxdo xubnaha waxa midowga uu yahay, waxa uu u taagan yahay, sida uu u shaqeeyo, waxa hadafyadiisa iyo barnaamijyadiisa ay yihiin. Waana adiga qofka dhegaysnaya xubnaha si uu u ogaado waxa ay dareemayaan iyo waxa ay rabaan, ka dibna dib ugu celinaya xogtan xafiiska midowga.
Daraasadaheena waxay caddeeyeen in maanta xubnaheena, sida dadka caadiga ah, uu wax-akhriskooda aad iyo aad u yaryahay; haddana ay aad u qiimeeyaan wada xiriirka midowga si ka badan sidii hore. Sida ugu wanaagsan ee midan loo sameeyo waa in xubnaha shaqsi ahaan loola hadlo.
WAKIILKA U DOODE AHAAN
Waxaa iman doona wakhti uu doorkaagu noqon doono inaad shaqaalaha u matasho cabasho. Heshiisyada intooda badani waxay si isku mid u qeexaan waxa cabashadu tahay. Guud ahaan, loo-shaqeeyuhu waa inuu ku xadgudbay:
Sharciyada federaalka, gobolka iyo degaanka.
Sharciyada iyo qaanuunada u gaarka ah loo-shaqeeyaha.
Dhaqan horay u soo jiray.
Haddii aad go’aansato in loo-shaqeeyaha uu xadgudub sameeyay, markaas waa inaad go’aamisaa marka xigta midka ka mid ah (labadan soo socda) noocyada xadgudubka ee la sameeyay:
CABASHOOYINKA EDBINTA Haddii loo-shaqeeyaha uu edbin ku soo rogo shaqaalaha, culayska wuxuu saaran yahayloo-shaqeeyahasi loo cadeeyo “sharci jabinta.” Sharci jabinta in la edbiyo waa shuruud ku jirta heshiisyada midowga badankood. Xitaa haddii aanan la qorin, dhexdhexaadiyeyaasha badankood way u baahan yihiin.
DHAMMAAN CABASHOOYINKA KALE Haddii wax edbin ah aan loo baahnayn, markaas mas’uuliyada midowga inuu caddeeyo in xadgudubka uu dhaco.
Noocyadan kala duwan ee xadgudubyadu waxay u baahdaan in lagu wajaho habab kala duwan. Hadda waxaad samaynaysaa wax ka wayn baaritaan. Waxaad diyaarinaysaa kiis.
Miyuu loo-shaqeeyaha si sax ah u baadhay ka hor inta uusan soo rogin edbinta? Misa miyay iskala soo boodeen un go’aankooda? Xagee ka heleen xogtooda?
Miyaa la dhamaystiray baaritaanka? Si cadaalad ah?
Miyaa caddaynta lagu qancay? Ama miyaa shaqaalaha lagu ciqaabay tuhun iyo hadal-hays un?
Miyaa shaqaaluhu loola shaqmay si cadaalad ah oo siman? Miyaa edbinta lagu soo rogay iyada oo ah eex la’aan ama takoor la’aan?
Ma jirtaa sabab uu shaqaaluhu u leeyahay inuu ku ogaado in xad-gudub la sameeyay? Miyaa shaqaaluhu si sax ah loo baray sharciyada iyo qaanuunada goobta shaqada? Ma jiraan wax digniin ah oo ay bixiyeen maamulku?
Miyaa xadgudubka horay loo fasaxay ama la iska dhaafay? Miyay ciqaabtu tahay qaanuun hore si degdeg ah loo soo celiyay?
Miyuu maamulku adeegsaday “edbinta heerarka leh”? Waxay ku jiri kartaa heshiiskaaga. Haddii aysan ku jirin, dhexdhexaadiyeyaasha badankood waxay aqoonsadaan xeerka. Tusaale ahaan:
Digniin afka ah
Kadibna digniin qoraal ah
Liiska Hubinta ee Cabashooyinka Edbinta «
Miyuu maamulku adeegsaday “edbinta heerarka leh”? Waxay ku jiri kartaa heshiiskaaga. Haddii aysan ku jirin, dhexdhexaadiyeyaasha badankood waxay aqoonsadaan xeerka.
Ka dibna ganaax
Ugu danbayna, shaqo ka tiris
Haddii uu jiray wax edbin sababi kara, xad dhaaf miyuu ahaa? Miyaa la iska indho-tiray marxaladaha “yaraynta xaalada” (sida adeeg dheer ama edbin hore)?
Miyay ciqaabtu ku habboon tahay xadgudubka?
Midka kasta oo ka mid ah su’aalahan kor ku xusan ayaa loo adeegsan karaa in lagu muujiyo in loo-shaqeeyaha uu falcelin sameyay iyada oo sharci jabin aysan jirin.
Liiska Hubinta ee Cabashooyinka aan Edbinta Ahayn «
Miyuu loo-shaqeeyaha ku xadgudbay heshiiska? Cabashooyinka noocaas oo kale ah waxay inta badan ku lug leeyihiin kala sarraynta, saacadaha shaqada, mushaharka, shaqaalaynta, xaaladaha shaqada, fasaxyada, iyo fasaxa sannadlaha ah.
Miyuu loo-shaqeeyaha ku xadgudbay sharci?
Miyay xadgudub ku tahay shuruucda ama mas’uuliyadaha gaarka ah ee loo-shaqeeyaha? Tani waxay badanaa ku dhacdaa cabashooyinka caafimaadka iyo badqabka.
Miyay jebisaa dammaanad qaadka in si siman loola dhaqmo shaqaalaha?
Miyay jabisaa dhaqan horay u soo jiray?